कुनै पनि मानिसको लागि अत्यन्तै चिलाउने कुरा असह्य र असहज हुन्छ । कहिले काही त यसले लाजमर्दो पनि बनाउछ । मानिसमा विभिन्न किसिमका छालाका रोगहरुद्वारा चिलाउने समस्या हुने गर्दछन । सबैभन्दा सामान्य चिलाउने छाला रोग मध्ये एक रिङ्गवर्म हो जुन एक किसिमको दाद हो ।
रिङ्गवर्म के हो ?
रिङ्गवर्म छालामा हुने एक ढुसीको संक्रमण हो। यसको नाम सुन्दा यो कुनै किराको कारणले लाग्ने रोगजस्तो लागे पनि त्यो सत्य होइन । धेरै प्रकारका फंगल जीवाणुहरू (फंगी)को कारण छाला, नंग र कपाल संक्रमित गर्न सक्दछ । ती फंगीहरुको समुहलाई टिनिया, डर्माटोफाइट इन्फेक्सन अर्थात डर्माटोफाइटोसिस पनि भनिन्छ ।
रिङ्गवर्म कसरी सर्ने गर्दछ?
मानिसमा रिङ्गवर्मको संग्क्रमण वा सर्ने धेरै कारणहरु छन् । संक्रमण भएको व्यक्तिलाईैछुएरपनिअर्को व्यक्तिमा रोग सर्न सक्छ । संक्रमितव्यक्तिलाई छोएपछि हातनाधुदासम्म जीवाणुहरू तपाइको छालामा रहन सक्छ।
संक्रमितव्यक्तिहरुले प्रयोग गर्ने र छुने तौली, कपडा, ओछ्यान ,कपडा , कुर्सी, चप्पल जस्ता वस्तुहरुबाट पनि यो रोग सर्ने गर्दछ ।जनावरहरुबाट पनि यो संग्क्रमण सर्न र फैलन सक्दछ । कुकुर , विरालो , गाइवस्तुहरुमापनि रिङ्गवर्मको जिवाणुहरु रहेको हुन सक्छ जुनमानिसहरुलाई सर्ने गर्दछ ।
वच्चाहरुमा यो जीवाणु छिट्टै फैलने सम्भावनाज्यादा रहेको हुन्छ । त्यसैले आफुले पालेका जनावरहरुमा रिङ्गवर्म भएको शंकाभएमापशुचिकित्सकसंग परामर्श लिनुपर्दछ । माटोमा पनि रिङ्गवर्मको फंगीविरलै रहेको हुन्छ र फंगी संग्क्रमितमाटोबाट पनि यो रोग सर्न सक्दछ ।
रिङ्गवर्मका लक्षणहरू के के हुन्?
रिङ्गवर्म छालामा रातो किसिमको पैसाको ढिक्का जस्तो आकारको रुपमा यो विकशितहुने गर्दछ । छेउको भागबाट गोलाकार आकारमा यो बढ्दै जाने कारण यसको नामपनि रिङ्गवर्म रहेको छ ।
यो किसिमको दादकहिले एउटामात्र हुन्छ भने कोहीकोहीमाशरिरको विभिन्नभागमा धेरै वटा हुने गर्दछ । रिङ्गवारमको कारण अत्यन्तै चिलाउने गर्दछ । कहिलेकाहीजलनपनिहुन सक्दछ । यसले नवजातशिशु देखि बुढापाकाहरुको शरीर भर छालामा संक्रमण गर्न सक्दछ । यसको ढुसीले कपाल र नङ्गलाई पनि संक्रमित गर्न सक्छ।
यस संक्रमणबाट कसरि बच्न सकिन्छ ?
यस संक्रमणको उपचार पश्चात पुर्ण रुपमा निको भएपनि कुनै व्यक्तियसको जिवाणुको सम्पर्कमा आएमापुनः संक्रमित हुन सक्दछ । यस संक्रमणबाट बच्न र उपचार गर्नको लागि यहा केहि उपायहरु छन्।
दैनिक नुहाउने गर्नुहोस र आफ्नो छालालाई सुक्खा राक्ने गर्नुहोस ।ओसिलो र भिजेको छालामा फंगस चाडै सर्ने र विकसित हुने गर्दछ । आफ्नो लुगा ,तन्ना , तौलियाहरु नियमितधोएर घाममा सुकाउनुहोस ।आफ्नो भित्रि कपडा साथै अन्य कपडाहरु स्त्री गर्ने गर्नुहोस ।
कटनको कपडा , मोचा र भित्रि कपडाहरु लगाउने गर्नुहोस । कसिलो कपडा तथा नाइलनको कपडाहरुको प्रयोग कम गर्नुहोस । ओसिलो तथा भिजेको र नसुकेको कपडाको प्रयोग नगर्नुहोस ।
छालामा हुने सबै गोलो यस्ता घाउहरु रिङ्गवर्म अर्थात दाद नहुन पनि सक्दछ । रिङ्गवर्म जस्तो देखिने एक्जिमा, सोरायसिस, कुष्ठ रोग आदि पनि हुन सक्दछन् ।
विभिन्न रोगलाई बिभिन्न उपचारको आवश्यक पर्दछ। त्यसैकारण यसको पहिचान गर्नको र त्यसको उचित उपचार गर्नको लागि डर्माटोलोजिस्ट (त्वचाविशेषज्ञ) संग परामर्श लिनुपर्दछ । तपाइको डर्माटोलोजिस्टले एउटा सानो के ओ एच परिक्षणद्वारा यसको पहिचान गर्न सक्दछन ।
धेरै व्यक्तिहरूले उचित जाँचको लागि डर्माटोलोजिस्ट कहा आउनु भन्दापहिले धेरै क्रीमहरू प्रयोग गर्दछन । जथाभावी प्रयोग गरिने क्रीमहरूमा धेरै स्टेरोइडहरू हुन्छन् जसले छाला पातलो हुने , स्ट्र्याच मार्कहरू (छाला फाटिने ), रातोपन, अनुहारमा लगाएमा अनावश्यक कपाल आउने आदि साइड इफेक्टहरू निम्त्युना सक्दछ। अझ महत्त्वपूर्ण कुरा, यसले रोगलाई उपचार प्रतिप्रतिरोधी बनाउन सक्छ। यसले दादलाई पनि परिवर्तन गर्दछ यसले गर्दा यो पहिचान गर्न गाह्रो हुन्छ।
रिङ्गवर्म संक्रमणको उपचारले हप्ता अथवा महिना तथा केहि लामो समय लिन सक्दछ । धेरै व्यक्तिले हल्का सुधार भएपछि उपचार रोक्छन्। यसले गर्दा रोग फेरि देखा पर्न सक्छ जुन पछी उपचार गर्न अझ गाह्रो हुन सक्छ। त्यसैले तपाईको डाक्टरद्वारा दिएको सल्लाहअनुसार उपचार कोर्स पूरा गर्न र नियमितफलो अप गर्न धेरै महत्वपूर्ण छ ।
परिवारका सदस्यहरूमा पनि उस्तै छालाको अवस्था हेर्नु धेरै महत्त्वपूर्ण छ। यदि त्यस्तो अवस्था छ भने उनीहरूको जाँच र उपचार एकै समयमा गराउन आवश्यक छ । अन्यथा संक्रमण परिवारका सदस्यहरुमा परिक्रमा गरिरहन्छ जसले गर्दा यसले बारम्बार दुख दिइरहेको हुन सक्दछ ।
डा तपन प्रधान
(भेनस स्किन एण्ड हेयर ट्रान्सप्लाण्ट क्लिनिक , विराटनगर)